प्रगति टोल आमा समुह ठाकुरापुरद्वारा झुगां दुर्गा मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर प्रगति टोल आमा समुह ठाकुरापुरद्वारा झुगां दुर्गा मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
प्रगति टोल आमा समुह ठाकुरापुरद्वारा झुगां दुर्गा मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
कपिलबस्तु : बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित प्रगती टोल आमा समुह ठाकुरापुर द्वारा निर्माण भैरहेको झँुगा दुर्गा मन्दिरलाई सहयोग गरिएको छ । निर्माणका क्रममा रहेको मन्दिरलाई थोरै भए पनि सहयोग होस भन्ने उद्देश्यले मासिक रुपमा बचत गर्दै आएको रकमबाट रु. १५ हजार ५ रुपैंया सहयोग गरिएको प्रगती टोल आमा समुहले जानकारी दिएको छ ।
आमा समुहका अध्यक्ष सपना मल्लको संयोजकत्वमा दुर्गा मन्दिर निर्माण समितीका अध्यक्ष अर्बिण मल्ललाई सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । रकम हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष मल्लले मन्दिर निर्माणमा आर्थिक अभाव भएको थाहा पाएपछि समुहका दिदी बहिनीहरु संग सल्लाह गरेर थोरै भए पनि सहयोग गरिएको बताईन् ।
यस्तै समुहका सचिव पार्बती बेल्बासेले आफ्नो गाउँमा निर्माण भैरहेको मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको दायित्व भएको हुँदा समुहका दिदी बहिनीहरुले सहयोग गरेको बताईन् । यसैगरी समुहका सदस्य बेलीसरा ज्ञवालीले आस्थाका धरोहरहरुलाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको दायित्व भएको बताईन् ।
आमा समुहका अध्यक्ष सपना मल्लले ब्यक्तीगत अर्थात मल्ल परिवारको तर्फबाट रु. १० हजार ५ रुपैंया मन्दिरलाई सहयोग गर्दे सबैले थोरै भएपनि सहयोग गरे निर्माण कार्यमा सहयोग हुने बताईन् ।
यसैगरि झुँगा दुर्गा मन्दिर निर्माण समितीका अध्यक्ष अर्बिण मल्लले प्रगती टोल आमा समुहलाई धन्यबाद दिंदैं आर्थिक अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिएको समयमा आमा समुहले घाउमा मलम पट्टी लगाई दिने कार्य गरेको बताए ।
उनले प्रगती टोल आमा समुहले जस्तै बिभिन्न समुह , क्लव , उद्योग ब्यबसायी , संघ संस्थाहरुले जति सकिन्छ सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । आर्थिक अभावका कारणले नै निर्माण कार्य रोकिएको हो । मन्दिरको अवस्थालाई हेरेर सहयोगी मनहरुले सक्दो सहयोग गरिदिनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रम टोल बिकास सस्थाका सचिव दामोदर पौडेलको संचालनमा समुहका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु , टोल बिकास संस्थाका कोषाध्यक्ष , मन्दिर निर्माण समितीका सल्लाहकार राजन सेन , सचिव फरिन्द्र प्रताप सेन , मुहान युवा क्लवका प्रतिनिधी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । भदौ ३१ गते सिलान्यास भएको दुर्गा मन्दिर आर्थिक अभावका कारण नै निर्माण कार्य रोकिएको मन्दिर निर्माण समितीले जानकारी दिएको छ ।